Ikhaya elimangalisayo eSchönberg Lachtal elinamagumbi okulala ama-5, iSauna kunye neWiFi
Eli khaya lihle kwaye linobunewunewu linazo zonke iimpawu ezifunekayo ukonwabela iholide eyonwabisayo. Phumla nje kwaye uzive usekhaya. Ikhaya libonelela ngayo yonke into oyifunayo ngexesha leholide yakho kwaye inazo zonke izinto eziluncedo ukusuka kwisauna ukuya kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Yonwabela indalo engqongileyo entle kunye nokuhambahamba, ukunyuka ecaleni kwechibi, okanye ukunyuka ukuya encotsheni. Imisebenzi eyahlukeneyo ibonelelwa ebusika kubatyibilizi. Yonwabela imidlalo yasebusika kwingingqi enezinyusi ezisi-8 zokutyibiliza kunye nethambeka lokutyibiliza. Le ngingqi intle ilungele iholide ehlotyeni nasebusika.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 20 m / ithuba lokuloba 1.5 km / ivenkile 700 m / ivenkile yokutyela 500 m / isixeko esikufutshane (Judenberg) 25 km / skilift 50 m / skiing indawo yezemidlalo (Lachtal) 50 m / amanzi (Ichibi) 1.5 km / cross- ilizwe skiing 100 m